यस्ता व्यक्तिमाथि सधैँ हुन्छ शनिदेवको कृपा, मिल्छ राजाको जस्तो सुख-सयल, तपाई पनि पर्नुभयो की ? – Sandesh Press
यस्ता व्यक्तिमाथि सधैँ हुन्छ शनिदेवको कृपा, मिल्छ राजाको जस्तो सुख-सयल, तपाई पनि पर्नुभयो की ?
July 2, 2021 338
काठमाडौँ । शनि देवलाई सबैभन्दा रिसाहा देवताका रुपमा चिनिन्छ । जसलाई न्यायका देवता पनि भनिन्छ। शनि देवले व्यक्तिलाई उसैको कर्म अनुसार फल दिने गर्छन्।
शनि देवको कृपा जो कोही व्यक्तिलाई सजिलै मिल्दैन्। तर जुन व्यक्तिमाथि शनिदेवको कृपा पर्छ, त्यसलाई सजिलै धन सम्पत्ति, मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैले शनि देवलाई कहिलै पनि रिसाउन दिनु हुँदैन्। यदी शनिदेव रिएसा जीवनमा सबै दुख एकै पटक आउन थाल्छ। शनिदेव एक पटक रिसाए भने उनलाई खुसी बनाउन निकै कठिन हुने गर्छ।
आज हामी तपाईलाई केही यस्ता बानीका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । यस्ता बानी कुनै व्यक्तिमा छ भने उसमाथि सधैँ शनि देवको सफल कृपा मिल्ने गर्छ र जीवनमा दुख तथा गरिबी हटेर जान्छ। आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती बानी ?
यदी कुनै व्यक्तिले कसैको बारेमा नराम्रो सोच्दैन, झुट बोल्दैन र सधैँ सबै मानिसको झलो चाहन्छ र सबै काम इमान्दारीका साथ गर्छ भने त्यसमाथि सधैँ शनि देवको कृपा मिल्ने गर्छ। साढेसातको दशा चलेपनि यस्ता व्यक्तिलाई शनि देवले कहिलै पनि कुनै किसिमको दुख दिदैनन्।
जो व्यक्तिले गरिब दुखीलाई सहयोग गर्छ र गरिब दुखी देखेर आफू पनि दुखी हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिमाथि पनि सधैँ शनि देवको कृपा रहने गर्छ। शनि देवले गरिब व्यक्तिको दुख धेरै सुन्ने गर्छन् र जो व्यक्तिले गरिबको सेवा गर्छ त्यसमाथि खुशी हुने गर्छन्। साथै यस्ता व्यक्तिमाथि सधैँ आफ्नो आदिर्शवाद हुने गर्छन्।
जो व्यक्तिले कुकुरलाई माया गर्छ, उसलाई कुनै प्रकारको दुख दिदैन् र भोजन खुवाउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिमाथि पनि सधैँ शनि देवको कृपा रहने गर्छ। कुनै पाल्तु कुकुर वा गल्लीका कुकुरको सधैँ ध्यान राख्ने व्यक्तिमाथि शनिदेव प्रशन्न हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
जो व्यक्तिले सरसफाईमा ध्यान दिन्छ, सधैँ स्नान गर्छ त्यस्ता व्यक्तिमाथि शनिदेव सधैँ प्रसन्न हुनुहुन्छ । यस्ता व्यक्तिलाई शनि देवले राजाको जस्तो सुख दिने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
जो व्यक्तिले सरसफाई गर्ने मानिसको सम्मान गर्छ र नम्र र शिष्ट भाषाको प्रयोग गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिमाथि पनि शनि देवको कृपा प्राप्त हुने गर्छ। साथै जो व्यक्तिले अरुले गरेको मेहनतको हक दिन्छन् र उनीहरुको कामको सम्मान गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिमाथि पनि शनिदेवको कृपा बन्ने गर्छ।
Prevतपाइलाई के लाग्छ यो संस्कृति कि बिकृति ?
Nextप्रकाश सपुतले त्यस्तो के भने ? जसले गर्दा अन्तर्वातामा नै रोइन् ज्योती मगर (भिडियो सहित)
घरमा यी ४ काम गर्नुहोस, सदैव लक्ष्मीको वास हुन्छ
१३ दिन अघि श्रीमती गु’माए, श्रीमतीको मृ’त्युको खबर सुन्न नपाई वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मीको पनि नि’धन
१४६ केजी महिलाले घटाइन् ८२ केजी तौल, यी ३ कुराले घट्यो तौल
बिहेपछि हनिमुन सुरु हुनै लाग्दा दुलाहालाई खोकी लाग्यो, डराएकी दुलहीले गरिन् यस्तो काम, सबैको उड्यो होस!
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्याल (10856)
अन्तत प्रियंकाले दिइन् छोरीलाई जन्म? (10419)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (7295)
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (7242)
भर्खरै सम्पूर्ण काठमाडौंबासीका लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर। (6209)
दुर्गेश थापाको आक्रोश: पल शाहले राति २ पटकसम्म क,*ण्ड*म नलगाइ जबरजस्ती गरेकै हो ..! (4736)
पल शाहले हिरासत बाटै लेखे आमालाई सन्देश, (4587)
फ्यानबाटै लखेटिइन् गायिका रचना रिमाल (4390)
अब खाना पकाउने ग्यास ११२० रुपैयाँमै पाइने! (3802)
“सबैको समर्थन देखेर मेरो हिम्मत बढेको छ, म यो लडाइँबाट हट्ने छैन ” गायिका समिक्षा (3706)
लामखुट्टेले किन अरुलाई भन्दा बढी तपाईंलाई टोक्छ ? यस्तो छ कारण…